Myanmar to announce Economic Relief and Reform Plan soon | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar to announce Economic Relief and Reform Plan soon
Min Thu Aung/MBT
The government of Myanmar will announce the Economic Relief and Reform Plan, Daw Aung San Suu Kyi, the State Counsellor of Myanmar, said in her address to the National Tourism Development Central Committee’s meeting held on January 8.
“We will issueaMyanmar Economic Relief and Reform Plan, which includes plans to remedy the impact of the COVID-19. It is also part of the sustainable development plan,” she said.
Moreover, the Ministry of Hotel and Tourism, in collaboration with local organizations, has developedaroadmap for reviving the tourism industry in line with the recommendation of the World Tourism Organization and the World Travel & Tourism Council. The roadmap, which includes short-term, mid-term, and long-term plans, have to be implemented linking with the Myanmar Tourism Relief Plan, Daw Aung San Suu Kyi said.
In addition, the government will also issueaNational Tourism Handbook by compiling all the guidelines on the prevention of COVID-19 issued by the related ministries for the safety of the travelers and staff who provide service are important.
“I want to urge everyone to work together so that all the practices becomeasystem, not just practiced for the time being. Now, the authorities have been implementing leisure flights and cruising trips in the river and will continue opening the beaches inline with the rules and guidelines. The tourism industry has faced global challenges and I want to encourage all the stakeholders in the industry to promote community tourism which displays our tradition and cultures,” she added.
She also called for innovation, technology, and marketing for the development of Myanmar’s tourism industry so that it can compete in the global tourism market.
မြန်မာ့စီးပွားရေးနာလန်ထူရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေး စီမံချက်ကို မကြာခင် ထုတ်ပြန်သွားရန် ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၈ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော အမျိုး သားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၁) သို့ အမှာစကား ပေးပို့ရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက် ညီသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုစီမံကိန်းမှာ COVID-19 သက်ရောက်မှုတွေ ကုစားရေးကိုပါ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးနာလန်ထူရေးနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး စီမံချက်ကို မကြာခင်ထုတ်ပြန် သွားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ချုပ်၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကောင်စီတို့၏ အကြံ ပြုချက်များနှင့်အညီ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ငန်းအသင်း အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ခရီးသွားကဏ္ဍ ပြန်လည် ထူထောင် ရေး မဟာဗျူဟာလမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲခဲ့ ကြောင်း ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်ရေးဆွဲ ထားသည့် အဆိုပါလမ်းပြ မြေပုံကို COVID-19 ကာလ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ကုစားမှု အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း အမှာစကား၌ ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်လည်ရှင်သန်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခရီးသွား များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရသော ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသည် အရေးကြီးသော ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက ထုတ်ပြန်ထားသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို ပေါင်းစည်းကာ COVID-19 ရောဂါ ကင်းဝေးရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသား ခရီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကို လည်း လက်စွဲအဖြစ် ထုတ်ပြန်ရန် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် မြန်မာ့ခရီးသွား အမှတ်တံဆိပ်အတွက်“စွဲမက်ဖွယ်ရာပြည်မြန်မာ” ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းအတည်ပြုထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ရာ၌ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကောင်စီ အသိ အမှတ်ပြု အမှတ်တံဆိပ် ရရှိရေးအတွက် သက်သက်မဟုတ်ဘဲအလေ့အထတစ်ရပ်ဖြစ်စေ ရန် စနစ်တကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သည် အထိ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးကြရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
“ကောက်ရိုးမီးလိုမျိုး တစ်ခဏတာ မဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုအဖြစ် အမြဲတမ်း တည်ရှိနေအောင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အခု အချိန်မှာ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ အပျော်စီးလေယာဉ် ခရီးစဉ်တွေ၊ မြစ်တွင်း ရေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ စတင်ပြီး ဆောင်ရွက် နေပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီးလည်း ကမ်းခြေဒေသ တွေကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နဲ့အညီ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ စီမံချက်တွေလည်း ရေးဆွဲနေပါ တယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်း ပြန်လည်ဦးမော့လာစေ ဖို့ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ရှေးအစဉ်အလာတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှုတွေအပြင် ပြည်သူ တွေရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေကိုပါ ဖော်ကျူးပြသ နိုင်တဲ့ လူထုအခြေပြု ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်ပြီး အားပေးမြှင့်တင် သွားကြစေချင်ပါ တယ်”ဟု အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ခရီးသွား စျေးကွက် တွင် တိုးဝင်နိုင်စေရေးအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်မြှင့် တင်မှုများကို ဟန်ချက်ညီညီ ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက် သွားကြရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
To know which pill is right for you, it is important to understand how the various types of birth control pills are designed to interact with your body. where to buy cialis in malaysia There are three overarching types of birth control pills :.
Previous article“The pandemic hasn’t stopped us”:alook back at 2020 with Yangon American International School
Next articleMyanmar and China ink MoU for Mandalay-KyaukPhyu railway project